Lucas Vazquez Oo Diiday Qandaraaska Cusub Ee Real Madrid?
Home Horyaalka Spain Lucas Vazquez oo diiday qandaraaska cusub ee Real Madrid?
Lucas Vazquez ayaa lagu soo waramayaa inuu diiday dalabkii ugu horeeyay ee kooxda heysata horyaalka La Liga ee qandaraas cusub.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa haatan galay lixdii bilood ee ugu dambeysay heshiiskiisa kooxda Los Blancos, in kasta oo tababare Zinedine Zidane uu dhawaan shaaciyay inuu doonayo inuu kusii hayo Bernabeu.
29 jirkaan boosaska badan ayaa inta badan xilli ciyaareedkaan la geeyay daafaca midig wuxuuna weli udub dhexaad u yahay Real Madrid, isagoo dhaliyay labo gool iyo seddex caawin 19 kulan uu saftay tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, Marca ayaa warinaysa in Real Madrid ay miiska soo saartay dalabkeedii ugu horreeyay ee cusboonaysiinta ee Vazquez, laakiin isagu si dhakhso leh ayuu u diiday dalabkaas.
Inkastoo la hubin mustaqbalka Vazquez hadana, warbixinta ayaa ku daraysa in Luka Modric uu sida ugu dhakhsaha badan qalinka ku duugayo heshiis cusub Real Madrid, halka sidoo kale waxaa jira rajo heshiis cusub oo ku aadan kabtanka Sergio Ramos .
Vazquez, oo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United , ayaa ku guuleystay seddex koob oo Champions League ah iyo labo La Liga shantii sano ee uu joogay Real Madrid.
Previous articleBarcelona oo soo bandhigtay seddexda bartilmaameed ee ugu sareysa bisha Janaayo
Next articleLiverpool oo guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda Southampton